यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! सेयर गरौँ भएकाले EBAY मा बेचौं ! - Dainik Patro
Posted on September 16, 2020 Author Dainik Patro	Comment(0)
जमाना यति छिटो परिवर्तन भयो कि मान्छे हरुले जे पनि अनलाइनमै काम गर्न लागे । अनलाइन बाट श्रीमती पाउँछन, अनलाइन बाटै नोकरी पाउछन भने पढाइ पनि अनलाइन मै हुन् थालेको धेरै भएको छैन ।इन्टरनेटको दुनियामा खरिद विक्रीको प्रख्यात वेब साइट हरु हुन् eBay, OLX र quikr । यी वेबसाइटमा तपाई जे पनि बेच्न र किन्न सक्नु हुन्छ । ” यी पुराना नेपाली नोटको मूल्य अहिले १० लाख भन्दा बढी, यसरि बेच्नुहोस र छिनभरमै लाखौ कमाउनुहोस”
नोटको विविरण, सिरियल नम्बर, कुन जमाना छापिएको सबै उल्लेख गर्नुहोस । तपाईले खिचेको नोटको सफा फोटो लाइ ebay को वेबसाइटमा अपलोड गर्नु होस् ।आफुले कति सम्ममा कसैले किन्न आए दिने ? मुल्य खुलाउनु आवस्यक छ । eBay को वेबसाइटमा नक्कली नोट अपलोड गर्न पाइदैन त्यसैले गलत धन्दा गर्छु भने जे पायो त्यहि नगर्नु होला ।यदि तपाइलाई नेपाली नोट बिक्रि हुदैनन भन्ने लाग्छ भने eBay को वेबसाइटमै गएर हेर्न सक्नु हुन्छ ।
‘कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको मिर्गौला निकालिन्छ’ भनेर अफवाह फैलाउने चिकित्सक पक्राउ
Posted on September 7, 2020 Author Dainik Patro
काठमाडौँ । कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएकालाई परिवारबाट अलग राखेर ‘किड्नी, आँखा र लिभर निकाल्ने गरिन्छ’ भन्दै अफवाह फैलाउने प्राकृतिक चिकित्सक सुवास सुब्बा लिम्बुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । महानगरीय अपराध महाशाखाबाट खटिएको टोलीले सुब्बालाई सोमबार ललितपुरको ढोलाहिटीबाट पक्राउ गरेको हो । प्राकृतिक चिकित्सक लिम्बुले एक युट्युब च्यानलमा बोल्दै ‘अस्पतालले आफन्तलाई भित्र छिर्न नदिएर संक्रमणबाट मृत्यु […]
लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरिने !
काठमाडौँ, २ जेठ । सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारी थालेको छ । कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव नारायण विडारीले विज्ञहरुसँगको छलफलपछि जोखिम क्षेत्र छुट्याएर लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको जनाएका छन् । बैठकले […]
दाङमा मृ;त्यु भएकी महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि !
१२ असार, काठमाडौं । दाङमा कोरोना संक्रमणबाट एक महिलाको मृ;त्यु भएको छ । प्रहरीले अचेत अवस्थामा भेटेर राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुर्‍याएको विरामीलाई चिकित्सकहरुले मृ;त घोषणा गरेका थिए । उनमा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । उनको परिवारसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने कोशिस भइरहेको प्रवक्ता डा. जागेश्वर […]
थाहै नदिई घर पुगेर छक्क पार्छु भनी काठमाडौंबाट एम्बुलेन्समा आएका स्याङ्जा का श्याम पंगेनीले, दुर्घटनामा ज्यान गुमाएपछि…
तुरुन्तै हेर्नु: बहिनि भन्दै गाडी भित्रै युवतीको मुख थुनेर ब%लात्का-र |आक्रोशित पिडित मिडियामा | भिडियाे September 28, 2020
हृदयघात हुनुभन्दा एक महिनाअघि शरीरले दिन थाल्छ यस्ता संकेत। पुरा पढ्नुहाेस September 28, 2020
कोरोनाबाट मरेकाले मलामी नपाउने यो कस्तो अमानवीय नियम ! : मिलन तिमिल्सिना September 28, 2020
कोरोना वार्डमा नर्स पारदर्शी पीपीइभित्र भित्री वस्त्र मात्रै लगाएर आएपछि… September 28, 2020
शा’री’रिक स’म्बन्धको विषयमा म’हिलाहरुले सो’च्छन् यस्तो अ’नौठो कुरा जानी राखौ !. September 28, 2020
बलिउडमा हिरोसँग सुतेपछि २ मिनेटको भूमिका पाइन्छ: कंगना September 28, 2020
किन युवतीहरुलाई दाह्री भएको केटा मनपर्छ ? September 28, 2020
संसद बैठकमै जब सांसदले प्रेमिकासंग यस्तो हर्कत गरे, भिडियो भाइरल September 28, 2020
यी हुन तीन महिनाको रु एक लाख ३५ हजार घरभाडा छुट दिने घरबेटी September 28, 2020
भगवान लाइ मान्नेहरू अबश्य पढाै: द्वापर युगमा गरिएका यी २१ भविष्यवाणी जुन अहिले सत्य सावित हुँदैछ ! September 28, 2020
महँगियो भान्सा, खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि गत वर्षको भन्दा दोब्बर !
छोरीको नाममा बाबुले लेखेको एउटा मुटु हल्लाउँने अन्तिम पत्र एकपटक अवस्य पढ्नुस् र सियर गर्नुस
स्थायी कमिटी बैठकअघि ओली र प्रचण्डबीच छलफलको तयारी !
Posted on September 9, 2020 Author Dainik Patro
तुरुन्तै हेर्नु: बहिनि भन्दै गाडी भित्रै युवतीको मुख थुनेर ब%लात्का-र |आक्रोशित पिडित मिडियामा | भिडियाे
हृदयघात हुनुभन्दा एक महिनाअघि शरीरले दिन थाल्छ यस्ता संकेत। पुरा पढ्नुहाेस
कोरोनाबाट मरेकाले मलामी नपाउने यो कस्तो अमानवीय नियम ! : मिलन तिमिल्सिना
कोरोना वार्डमा नर्स पारदर्शी पीपीइभित्र भित्री वस्त्र मात्रै लगाएर आएपछि…